China China Disc Harrow For Agricultural 1BQX ụlọ ọrụ na ndị na - eweta ya | RY AGRI
Usoro 1BQX Light-duty Disc Harrow dị mma maka ihichapụ ma na-atọghe clods mgbe ịkọ na maka ịhazi ala tupu ịgha mkpụrụ na ala azụ. Igwe ndị ahụ nwere ike ịme ka ala na fatịlaịza gwakọta, ma kpochapụ ogwe osisi nke ọkụ na ala ma ọ bụ ala ọkara na ịkwadebe akwa mkpụrụ maka ịkọ ihe.
A na-eji eriri igwe ruru eru mepụta usoro Light-duty Disc Harrow, ihe owuwu ha dị mfe ma nwee ezi uche, siri ike ma dịgide, dị mfe iji rụọ ọrụ, ọ dị mfe ijikwa na ịrụ ọrụ nke ọma na-emegharị ma na-abanye n'ime ala ma hapụ ala ahụ ka ọ dị mma, ọbụna tilth. Ihe ndị a niile na-emeju ihe a chọrọ iji kọọ ugbo.
Usoro 1BQX nkwusioru Light-duty Disc Harrow n'ihu na n'azụ òtù ndị omempụ na-niile gbakọtara na scalloped diski, ike ga-eji na site na 12HP ka 70HP ụdị traktọ.
Na-arụ ọrụ omimi
Mba nke diski
Jiri, ndozi na ndozi
1. Iwu maka iji zaa:
(1) Rake na ihe mkpuchi niile ga-agbanwe.
(2) Mgbe rake na-arụ ọrụ, amachibidoro ịlaghachi. Mgbe rake na-atụgharị, a ga-ebulite ya.
2. ukpụhọde nke zaa omimi:
(1) Mgbe ukpụhọde zaa otu deflection n'akuku, na U-bolt na zaa otu kwesịrị atọpụ mbụ. Ihe omimi omimi ga-abanye omimi na mmụba nke akụkụ ntụgharị. N'ozuzu, akụkụ ntụgharị ihu nke ihu na azụ dị iche iche kwesịrị ịdị n'otu akara. The n'azụ otu otu bụ 3 Celsius ibu karịa n'ihu zaa otu. Mgbe emezigharị ka ọ bụrụ akụkụ kwesịrị ekwesị, U-bolt kwesịrị ịgbatị.
(2) N'ozuzu, enwere ike ịgbakwunye oghere ala nke harrow.
3. Kwụ na vetikal ukpụhọde nke zaa.
(1) Enwere ike idozi nsogbu ahụ site n'ịgbanwe ogologo traktị njikọ traktị ma dọpụta mkpara.
4. Mkpochapu ihu ugwo ahihia:
E kwesịrị ịgbatị njikọ dị elu nke njikọ traktọ, ma ọ bụ, a ga-eme ka ndị otu n'ihu na azụ zaa ya n'akụkụ nke ọzọ maka nha anya nhata n'otu oge ahụ, ma ọ bụ belata akụkụ ntụgharị ihu nke otu zaa n'ihu.
5. Ndozi nke nhichapu nhichapụ:
Nwechapụ n'etiti mma nke scraper na concave elu nke zaa agụba kwesịrị 1 ~ 8 mm. Mgbe ị na-arụ ọrụ na ala nwere nnukwu mmiri ma ọ bụ ahịhịa, a ga-ebu obere dị ka o kwere mee
Nke gara aga: Arọ Disc Harrow Maka Ugbo 1BJ
Osote: 3Z Cultivator Maka Oka Soybean Cotton